अन्ततः कल्पना दाहालले पुषमै गरिन धुमधामसंग बिहे,बेहुली बन्दा लाजले भुतुक्कै भइन कल्पना,राजु परियारले हँसाए – Sandesh Press
अन्ततः कल्पना दाहालले पुषमै गरिन धुमधामसंग बिहे,बेहुली बन्दा लाजले भुतुक्कै भइन कल्पना,राजु परियारले हँसाए
कल्पना दाहाल,राजु परियार र पुरुस्वतम पौडेलले आवाज दिएको नया गीतको सुटिङ्गको क्रममा कल्पना दाहाललाई बेहुली बनाईएको छ।गीतमा कल्पना दाहाल बेहुली छिन भने पुरुषोत्तम पौडेल बेहुला रहेका छन भने गीत निकै आस गरिएको छ।यही पौष ४ गतेबाट उक्त गीत पुरुषोत्तम पौडेलको युटुब च्यानल मार्फत आउने रहेको छ।हेरौ भिडियो कुराकानी :
आफूभन्दा तीन गुणा कम उमेरकी केटी कल्पना दाहालसँग दोहोरि खेल्दा…..
न सिर्जना मर्छ, न त सिर्जनशील व्यक्तिको नाम मर्छ । भौतिक स्वरूप गुम्ला तर प्रतिभा रहिरहन्छ । यति मात्र होइन, सीप सिकेपछि सधैँ काम लाग्छ । लामो समय प्रयोगमा नल्याउँदा केही धुमिल होला तर प्रयोगपछि जस्ताको तस्तै । यो प्रसङ्ग सर्जक देवी गौतमसँग मिल्न जान्छ ।
एक साताअघि गौतमलाई दोहोरी गाउन अनुरोध गरियो । सत्तरीको छेउछाउ पुग्नुभएका गौतमले दोहोरी नगाएको तीन दशक भएछ । गाउँ छाडेको लामो समय भयो, न गाउँमा यस्तो राम्रो अवसर । गौतम दोधारमा । सहमति जनाउनुपूर्व उहाँले सोध्नुभयो, “कोसँग गाउने ?” उत्तर आयो–कल्पना दाहालसँग । अबचाहिँ मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्यो । कल्पना मामुली दोहोरी गायिका होइनन् ।
कल्पनासँग दोहोरी खेल्न चानचुने आँटले पुग्दैनथ्यो । सधैँ दोहोरी साँझमा देखिने र जस्तो प्रश्न उस्तै उत्तर फर्काउने कल्पनासँग टक्कर गर्न सहज थिएन । तैपनि गौतमले हुन्न भन्न पाउनु भएन । बाध्यात्मक सहमतिपछि दोहोरी खेल्ने दिन आयो । तामझामका साथ दोहोरी शुरु भयो । दोहोरीका झ्याली/झ्याम्टा, मादल बजे तर गौतमको मनको ढ्याङ्ग्रो बज्यो । दोहोरीको शुरुमा माया/जालभन्दा बाहिरको कुराले दोहोरी खेल्ने निधो गर्नुभयो गौतमले । तर प्रस्तोताले माया/जालमै दोहोरी खेल्न अड्डी कसे । लौ पर्यो फसाद !
आफूभन्दा तीन गुणा कम उमेरकी केटीसँग दोहोरी खेल्नुपर्ने । त्यसमा पनि माया/जालका बारेमा । समस्या यत्तिमै सीमित रहेन । श्रीमती, साली र आफ्ना अग्रज पनि साक्षी राखेर । त्यतिबेला गौतमलाई के भएन होला । घरी तिर्खा लागेझैँ भयो, घरी गलेझैँ भयो शरीर । ‘बाह्र हात नाघेर भित्तामा हार्नु’ पनि भएको थिएन । एउटा जीवनको परीक्षा शुरु भएझैँ भयो ।
तैपनि हिम्मत कसेर गौतमले दोहोरी शुरु गर्नुभयो । साथीभाइको सरसहयोगले अपेक्षाभन्दा राम्रै उत्तर फर्काउँदै जानुभयो । सिर्जना हो नि कसरी मथ्र्यो र । गौतमलाई विस्मृत भएका दोहोरीका भाका आँखामा आउन थाले । तिनै भाकालाई उत्तर बनाएर उहाँले फ्याँक्न थाल्नुभयो । दोहोरी चल्दैथियो कल्पनाले श्रीमतीकै प्रसङ्ग निकालेर प्रश्न गरिन् :
अब यतिपछि गौतम रक्षात्मक हुनुपर्ने भयो । प्रश्न जटिल थियो । तर हिम्मत कसेर गौतमले उत्तर फर्काउनुभयो–
जेनतेन उत्तर आयो । दोहोरीभर यस्ता प्रश्न आइरहे । गौतमका उमेर, दाह्री, दाँतका बारेमा अनेकन प्रश्न सोधिएको थियो । तर पनि अभ्यस्त उहाँले जस्ताको तस्तै उत्तर फर्काउनुभयो । गौतमले दोहोरी खेल्न डराउनुको कारणचाहिँ लामो समयको दोहोरीतर्फको विश्रामले हो ।
युवावस्थामा दोहोरीकै लागि गौतम साथी/सङ्गीसहित ठाउँठाउँ पुग्नुहुन्थ्यो । पछिल्लो समय उमेरसँगै बढेको बिर्सिने बानीले होला फर्काउन गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर भएन । कार्यक्रमपछि कल्पनाले गौतमको सराहना गरिन् । यो कार्यक्रमले गौतमको दोहोरी खेल्ने शक्ति मात्र बढाएन । शुभचिन्तकसमेत थपेको छ ।
स्कूल लाग्दा पढाइमा, छुट्टीमा चाहिँ दोहोरी
गौतमको जीवन दोहोरी र लोकगीतमा मात्र सीमित रहेन । लामो समय शिक्षक भएर विद्यालय र घर गर्दैमा बित्यो । दोहोरीप्रतिको लगाव सानैदेखि नै थियो तर ऊ बेला पढेको मान्छे कम हुने । जागिर नखाई नहुने । पारिवारिक स्थितिले पनि गौतमले जागिर नखाई धर पाउनुभएन ।
विसं २०११ मा जन्मिनुभएका गौतमले २०३५ देखि २०५९ सम्म त जागिरमै रहनुपर्यो । जागिरमा रहँदा पनि लोकभाका र दोहोरीसँग चुर्लुम्म डुब्नुभएका उहाँलाई कसले छेकेर राख्नसक्थ्यो र । विद्यालय सञ्चालन हुञ्जेल पढायो । छुट्टी भएपछि गायकीमा रम्यो । गौतमले जीवनकालमा चारवटा विद्यालयमा अध्यापन गराउनुभयो । अनि केही समय शिक्षा कार्यालयमा । यो समयमा गौतमले लोकदोहोरीलाई चटक्कै छाड्न सक्नुभएन ।
“विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउँदै कतिपय कुरा जान्दथेँ । तिनै कुरालाई लोकगीत बनाइहाल्थेँ”, गौतमले भन्नुभयो, “मेरा विद्यार्थी, शिक्षक र आफन्त मेरा गीतका प्रेरक हुन् । जस्तो देख्थेँ । त्यस्तै लेख्थेँ ।” हुन पनि हो गौतमका गीतमा शहरबजार, राजधानी, विलासिता कहीँ भेटिदैन । केवल भेटिन्छ त आफैँले खाइखेली गरेको आफ्नै जन्मघर र अनि आफ्नै गाउँ ।
मङ्गलबारे डाँडामा लै लै… बुधबारे, हाट लाग्ने
निष्ठुरीलाई माया नलाए, बैँसको पाप लाग्ने ।।
आफैँ लेखक, आफैँ सङ्गीतकार, अनि आफैँ गायक । विसं २०४५ तिर रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ गरेको लोकगीत हो यो । गौतमको क्षमता दोहोरीजस्तै लोकगायकीमा पनि थियो भन्ने यो गीतबाट प्रष्ट हुन्छ । अहिलेको देउमाई नगरपालिकाको केन्द्र मङ्गलबारे । यहाँ मङ्गलबारे भनिए पनि बुधबार हाट लाग्छ । अनि उतापट्टि धाममा लाग्ने गजुरमुखी मेला र देशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य अन्तुडाँडालाई आधारमा राखेर गाइएको गीत । गाउँघरको चित्रणसहित मायाका भाका फ्याँकेपछि सायदै सबैको मनमा बस्यो यो गीत । आफ्ना साथीभाइको उत्साह र दर्शक÷स्रोताका मायाले गौतमलाई झनै यसै क्षेत्रमा तान्यो । उहाँले लोकभाका नै कथेर दुई वटा एल्बम निकाल्नुभयो भने कति त अझै पाण्डुलिपिमै रहेका छन् ।
लोकदोहोरी गौतमको मनमै बसेको थियो । कहीँकतै यो कार्यक्रम हुने बुझेपछि गौतमको मन पुगिहाल्थ्यो । मन मात्र होइन शरीर पनि । त्यतिबेला आउन, जान, खानका लागि प्रबन्ध हुँदैनथ्यो, तर गौतम केही साथीसङ्गी लिएर कार्यक्रमस्थलमा पुगिहाल्नुहुन्थ्यो ।
खेलकूद मन्त्रालयअन्तर्गत वर्षमा एकपटक दोहोरी प्रतियोगिता गराइन्थ्यो । त्यही पनि अञ्चलस्तरीय । अञ्चलस्तरीय जितेमा राष्ट्रियस्तरमा पुगिने । रहर त हो । गौतम पनि वर्षमा एकपटक प्रतियोगितामा पुग्नु नै हुन्थ्यो । तीन पटक त अञ्चलस्तरीय दोहारी जित्नु नै भयो । राष्ट्रियस्तरमा भने केही लागेन । जित्न त जितिएन दोस्रो पनि भइएन । तर पनि अहिले खुशी हुनुहन्छ गौतम । पुराना स्मरण केलाउँदा गौतमका दिमागमा कोमल ओलीसँग दोहोरी खेल्दाको प्रसङ्ग सधैँ आइहाल्छ । कुरा विसं २०४५ ताकाको हो । प्रतियोगिताकै लागि गौतम वीरगञ्ज पुग्नुभएको थियो । दोहोरी चल्दै थियो । गौतमले प्रश्न गर्नुभयो :
गौतम : तिमी फूल म परेँ भमरा
ओली : भमरा हैनौँ तिमी त वीरगञ्जको मच्छड
गौतमको सानदार उत्तर थियो त्यो । अहिले पनि उहाँको कानमा घुमिरहन्छ, यो दोहोरी । दोहोरीकै लतले गौतमले स्वेच्छाले जागिर छाड्नुभयो । अनि शुरु भयो समाजसेवा । दशकभन्दा बढी गौतम नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इलामको सभापति बन्नुभयो । अहिले गौतम पूर्णरूपमा लेखक बन्नुभएको छ । जीवनको उत्तराद्र्धमा केही गर्ने विचार छ गौतमको ।
“अझै केही एल्बम निकाल्ने तयारीमा छु”, गौतम भन्नुहुन्छ, “केही कविता पनि लेख्दैछु । गुम्दै गएको छन्द कविता लेख्ने तयारीमा छु ।” गौतमलाई लोप हुँदै गरेका विषयमा कलम चलाउन मज्जा लाग्छ । जागिरे जीवनमा रहँदैमा पनि लोकगीत गाउनुको अर्को कारण यो पनि हो । “लोकगीत÷भाका लोप हुनै लाग्यो । यसलाई बचाउन पनि हामी लाग्नुपर्छ भनेर यसैमा लागेँ ।”
हुन त लोकदोहोरीमा दुईतिर केटा र केटी बसाइन्छ । अनि एकले अर्कालाई प्रश्नमाथि प्रश्न र प्रश्नको उत्तर बर्साइन्छ । विशेषगरी दोहोरीमा माया÷प्रेमकै कुरा हुन्छ । प्रेम, विवाह, जीवन/मरणसम्मका विषय उठान गरिन्छ । यही विषयलाई कतिले वाहियात भनिदिन्छन् ।
केटा र केटी जिस्किने भनेर चित्रण गर्नेलाई गौतम दोहोरीको मर्म नबुझ्ने व्यक्तिको सङ्ज्ञा दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार दोहोरी सबै विधाभन्दा जटिल विधा हो । नलेखी र नरटी, जहाँको तहीँ, जस्ताको तस्तै, उत्तर फर्काउन सहज नहुने गौतमको भनाइ छ ।
यतिमात्र होइन, दोहोरीमा जीवन्त कथा समेटिएकाले अन्यथा बुझ्न नहुने उहाँको टिप्पणी छ । गौतमले आफ्ना छोरो र छोरीलाई पनि यही विधामा ल्याउन डोर्याउनुभएको छ । बाबुको कामको सराहना गर्दै पछिल्लो पुस्ताले पनि अँगालेकामा खुशी हुनुहुन्छ गौतम । केही गीत लेख्ने, गाउनेबाहेक खासै ठूलो धोको छैन गौतमको अब । उहाँ भरसक जिल्लाका सबै ठाउँमा लोकदोहोरी र लोकगीतका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यमा हुनुहुन्छ । “म एक्लो मान्छेको केही लाग्दैन । साथीभाइले सहयोग गरे जिल्लाभर लोकगीतका बारेमा जानकारी गराउने छु ।”
Prevपुटपाथमा सुतिरहेका मजदुरहरुलाई ट्रक’ले कि’च्दा घ’टनास्थलमै १५ जना’को मृ’त्यु
Nextपोखरामा फिल्मी सैलिमा देउसै नगर बस भित्रै चोरी ! हेर्नुहोस यसरी समातेर सार्बजनिक गर्यो प्रहरीले